Ko Pets Your Iti About You
Last updated: Chivabvu. 13 2019 | 3 Maminitsi verenga
Kufanana kana kwete, nzira isu tiende kuburikidza upenyu anotaura zvakawanda pamusoro siyana zvinoratidza unhu hwedu. Semuyenzaniso, munhu ane kugara pabasa aizongova vane zvishoma chandagwinyira maonero kune upenyu aine propensity nokuda kururama. Pane rimwe divi, unogona zvinenge kuva nechokwadi kuti waaishanda akauya kuhofisi pamwe sosi rake hembe ruoko zvichida asina kungwarira chaizvo munhu. Ehe saizvozvo, izvi hazvifaniri kuva chaicho munhu uchitikurudzira unhu. zvisinei, ivo njodzi chinoratidza sei kuti munhu kazhinji kuonesesa upenyu. In kuwedzera ichi, vanhu vasarudze mhuka zvakasiyana sezvo dzinovaraidza aizongova kugoverana unhu.
Chinofadza ndechokuti imbwa varidzi vari chaizvo nehanya, kudziya mwoyo uye akaita. Shure kwezvose, imbwa vanofanira zvaifanira kutarisirwa. Kana mumwe wako ari imbwa munhu, pane mukuru chaizvo mukana kuti sevanonyanya rudo mune ukama. vanoda Dog waizovawo zvikuru nebasa chete nokuti kuti imbwa pashure zvose zvinoda yakawanda nzeve uyewo. Chimwe chinhu chakanaka pamusoro imbwa varidzi ndechokuti vakawanda nguva, ndivo kupfuura rakavimbika uye kutendeseka mujenya.
Cats vave vachizivikanwa kuti ushamwari chaizvo kumativi vanhu. zvisinei, vari zvakare zvisikwa nehanya uye chaizvoizvo kuda rudo. Cat varidzi zvinoratidza unhu zvakafanana. Vari zvikuru kuda dzavo dzinovavaraidza uye chaizvoizvo nokuva musimboti pfungwa (kunyange varege kuratidza ichi). Kiyi achifambidzana muridzi katsi iri nokuratidza zvakafanana hanya uye kuva nehanya madengetera avo.
Ehe saizvozvo, pane zvakawanda gakava pamusoro kana chaizvoizvo zvakanaka kuchengeta shiri sezvo imba chipfuwo. Kunyange zvazvo vamwe vanhu vanoita vawane wakapoteredza nokuvaka shiri mumakeji mubindu ravo uye nokupa shiri dzavo rusununguko famba famba sezvavanoita sezvingatarisirwa kuita. Bird varidzi vanorarama hupenyu hwavo rimwe zuva panguva uye sezvo vakadaro, anowanzoshandurwa kuti kuwanikwa vasiri conformist pazviruva. Naivowo sevanonyanya rokusika uye zvarisingazivi.
Hove sezvo mhuka dzinovaraidza vakaita pedyo vasiri zvipenyu zvinhu sezvo mhuka inovaraidza kunogona kuva. chokwadi, zviri zvikuru kuona hove dzinoshambira iri hove mundiro kana tangi. zvisinei, munhu haasi pakunyatsomuziva mbiri-nzira zvikuru kudyidzana pamwe nehove. Vanhu vanofarira nehove nokuramba sezvo dzinovaraidza kazhinji yakanyarara pane vakawanda. zvisinei, vari zvakare zvakanaka pane vamwe vanhu uye hadzifaniri hanya akawanda vanhu dzemunharaunda.
tsuro, hamsters neGuinea nenguruve
Mhuka idzi zvakawanda anowanzoita vakafarirwa vaduku uye kuyaruka. Ehe saizvozvo, panewo anoverengeka vakuru vanoramba diki, Negima zvisikwa sezvo dzinovaraidza. kazhinji Ava ndivo vanhu vanoita vanofarira itirana ukama asi vanoda chaizvo kuedza pasi kutanga tichitarisa dzinovaraidza. Vanodawo kudziya uye ndiratidze katsika kune basa. Ava vanoda dzinovaraidza zviri kunakidza rudo uye chinosetsa.
Zvakadini nevaya vasina dzinovaraidza pamba? Kana kunyange vaya havabvumi chero rudo mhuka? Muchiitiko ichi, naro zvachose hazvirevi kuti inotonhora mwoyo kana vasiri musika ukama rudo. Ezvinhu kuridza chikamu chinokosha kuona kana munhu aizova zvikuru nechido pane vamwe varidzi chipfuwo. Non-mhuka dzinovaraidza kunogonawo kuva vakavimbika chaizvo, mutoro uye hanya!
Muchidimbu, zvichida chaizvo kuti imi achauya kuyambuka muridzi chipfuwo ane hapana unhu pamusoro apa. Izvi haisi kupedzeredza mazita unhu maererano mhando mhuka kuti munhu anoda. zvisinei, Kutsvakurudza zvakakwana rave inoitwa kuratidza kuti pane vakawanda nekubvirana pasi hunhu uye unhu neimwe mhuka anoda kungangova ive. Pasinei chipfuwo wakachengetwa pamba, ukama ichiri Verengai zviviri zvakaenzana zvikamu pakati vaviri vakaita vanhu.
Ida Dogs : New Leash On Life